ဆုံဆည်းရာ: "ဖာလမ်းစဉ်ထက် ကောင်းတာ မရှိတော့ဘူးလား"
"ဖာလမ်းစဉ်ထက် ကောင်းတာ မရှိတော့ဘူးလား"
ဘယ်လောက် နက်နေမယ် ဆိုတာ
မြစ်ထဲမှာမွေးတဲ့ အကောင် သန်း ၆၀ ဟာ
ရေချိုး ရေသောက် ရှင်သန်တယ်။
မြစ်ထက်ကို နာဂါးလီးက ပိုရှည်နေတယ်
နဂါးဟာ သူ့အကောင် သန်း ၁၀၀၀ ကျော်ကို
နဂါးလာတာကို မြစ်က ငြင်းတယ်
မြစ်ထဲက အကောင်တွေက လက်မခံဘူး
ဂုတ်ကိုကိုက်ပြီး အကုန်ကိုက်စုတ်သွားမှာ လို့
မြစ်ကြီး အကုန်ခမ်းခြောက် ပျောက်ဆုံးသွားရင်
အကောင် သန်း၆၀လုံး အနာဂတ် သေကုန်မှာလေ။
လောဘကြီးတဲ့ နဂါးဟာ လွယ်လွယ်နဲ့ မလျော့ပါဘူး
မြစ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပိုင်ရာဆိုင်ရာ
လူကြီးသူမဆိုတာတွေကို နည်းပေါင်းစုံနဲ့ ဝင်ပူးတယ်
ကမ္ဘာကျော် အမေအို မုဆိုးမကြီးကို တွေ့ပါလေရော...
နဂါးက အမေ့ကို ချွဲရင်းချော့ရင်း ပြောတယ်
"မြစ်ဟာ စောက်ဖုတ်နဲ့ တူပါတယ်" တဲ့
"လိုးပေးရင်း လိုပေးရင်း ချမ်းသာကျယ်ပြန့်ဝပြော လာမှာပါ" တဲ့
"နဂါးမှာလည်း ၁၀၀၀ စား/၁၀ အန်တဲ့ ပေါ်လစီ ရှိပါတယ်" တဲ့
"အခုတော့ အစမို့ ဖြေး ဖြေး ချင်းပဲ ထည့် မှာပါ" တဲ့
အမေဟာ သိပ် ထန် နေလို့လားမသိ
နဂါးစကားကို သိ နားလည် သလိုလိုနဲ့
နဂါးလီးကို ကြည့် ဖီးလာ သလိုလိုနဲ့
သားသမီး သန်း ၆၀ကို စပြီး ချော့မော့ဖျားယောင်းတော့တယ်
အကောင် ၆၀ ဟာကပဲ
နဂါးကို လည် ဝိုင်းလှီးသတ် လိုက်မလား
နဂါးလီး အဆင့်ဆင့်နစ်ဝင်လာမှုနဲ့ အာသာဖြေသွားမလား
ဘုရား...ဘုရား...ဧရာဝတီ စ/ဆုံးထက် ပိုရှည်တယ် အမေရေ...
စောက်ဖုတ်နဲ့ တူတဲ့ အမေအိုကြီးဟာ
မြန်မာပြည်အနာဂတ်တမွဲ--- စောက်ဖုတ်ထဲ အထည့်ခံလိုက်ပြီလား
သေခါနီး လီးရိက္ခာယူသွားတာက အရေးမကြီးပါ
အမေ့မြေးကို ပတ်ဖို့ မီးနေအနှီးဝတ်လေးတောင်
ညောင်ပင်အမြစ်ကိုတောင် သူတိုင်းပြည်ထဲ သယ်သွားသေးတာ
အမေ့သမီးခလေးဖာဖြစ်မဲ့ကိစ္စ အသဲကွဲနေမယ် ထင်လို့လား
ဖီးလာလို့ နဂါးကို ပြုံးချင်ကုန်း ပူးချင်နှူး
တိုင်းပြည်ကို အပေါင်ဆုံး လုံးဝ အဖြစ်မခံနိုင်ဘူး
ဧရာဝတီကို ချစ်မြတ်နိုးသစ္စာစောင့်ရှင်သန်သူတွေ ညီကြမယ်။ ။
Posted by Anonymous at 4:50 PM
CRKB IT SOLUTION PVT LTD said...
I always look forward for such nice post & finally I got you. Thanks for sharing this content.
CMS ED Course
Very informative article. Keep writing such nice post
Taxi Services In Greater Noida
Really very impressive post & glad to read this. Good luck & keep writing such awesome content.
Great Article... Merry Christmas